Dowlada Somalia oo war cusub ka soo saartay heshiis ay horey ula gashay Shirkadda Sahal.
0 Monday February 05, 2018 - 08:26:04
Wasiirka Gaadiidka iyo duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeeray xarunta shirkadda Sahal oo Rakaabka basas ku geysa garoonka diyaaradaha Muqdisho
Dilal xalay & saaka ka kala dhacay Magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho.
0 Monday February 05, 2018 - 07:22:51
Labo nin oo midkood uu ajnabi yahay ayaa xalay iyo saaka siyaabo kala duwan loogu dilay magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho.
Duqa Muqdisho oo booqashadii ugu horeeysay ku tagay Degmada Kaxda .
0 Sunday February 04, 2018 - 10:17:37
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow) ayaa maanta kormeer shaqo ku tagey degmada Kaxda ee galbeedka magaalada Muqdisho, halkaas oo ku soo dhaweeyeen maamulka iyo shacabka degmadaas.
Daawo.Nin si xeeladeysan u kufsaday boqolaal gabdho yar yar oo xukun adag lagu riday.
0 Thursday February 01, 2018 - 08:22:43
Dhaqtarkii kooxda qalaama-rogadka Maraykanka Larry Nassar ayaa la ogaaday inuu faro xumeeyay gabdho yar yar oo gaaraya illaa 265 qof
0 Thursday February 01, 2018 - 08:05:44
Dowlada Mareykanka oo liiska argagaxisada ku dartay hogaamiye caan ah.
0 Thursday February 01, 2018 - 07:19:10
Mareykanka ayaa hogaamiyaha ururka Hamas, Ismaciil Haniyeh ku daray liiska argagixisada ee Mareykanka, kadib markii ay sheegeen in Ismaciil loo aqoonsaday inuu yahay argagixiso caalami ah.
Xildhibaano laga mamnuucay in ay ka baxaan Kismaayo iyo Sababta ka dambeysa
0 Wednesday January 31, 2018 - 11:51:42
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeda Hogaamiyaha maamulka Jubbalabd Axmed Madoobe ayaa lagu soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah.
Kenya oo mamnuucday dhaq dhaqaaqa Wax iska caabinta mucaaradka ee NRM.
0 Wednesday January 31, 2018 - 09:47:06
Dowlada Kenya ayaa ku dhawaaqday in dalka laga mamnuucay dhaq dhaqaaqa Wax iska caabinta mucaaradka ee NRM, waxa ayna dowlada ku tilmaantay dhaq dhaqaaqan in uu yahay mid burcad.
Wararkii ugu Dambeeyay Xiisad ka taagan Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo la kulmaya…
0 Wednesday January 31, 2018 - 08:29:59
Wararka aan ka heleyno magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in xiisad xoogan oo u dhaxeysa ciidamada Nabad sugida Jubbaland iyo ciidamo kale oo hubeesan ay ka taagan tahay magaalada.
0 Wednesday January 31, 2018 - 08:26:04
0 Tuesday January 30, 2018 - 10:56:18
Maamulka Cusub ee gobolka Banaadir oo xilka si rasmi ah ula wareegay.
0 Tuesday January 30, 2018 - 09:52:20
Waxaa xalay xarunta Dowlada Hoose ee Xamar lagu qabtay munaasabad balaaran oo xilka kula kala wareegayeen Maamulka Cusub ee gobolka Banaadir iyo maamulkii hore ee xilka laga qaaday.
Mid kamid ah Dowlada Caalamka oo la sheegay in ay Basaasto Xogta Midowga Afrika.
0 Tuesday January 30, 2018 - 08:19:58
Dowlada Shiinaha oo kamid ah Dowladaha Caalamka ugu awooda badan ayaa lagu eedeeyay in ay basaasto xarunta Midowga Afrika ee kuyaala magaalada Adis Ababa ee dalka Itoobiya.
Guddoomiye Yariisow oo booqday Xarumaha Maamulka gobolka Banaadir.
0 Monday January 29, 2018 - 13:11:27
Gudoomiyaha Cusub ee Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Ing. C/raxmaan Yariisow iyo ku xigeenadiisa ayaa maanta booqday xarunta Maamulka gobolka Banaadir oo ku taalla degmada Xamar-weyne.
Uhuru Kenyatta oo ka horyimid Qorshe Ciidamada AMISOM sanadkan uga baxayaan Somalia.
0 Monday January 29, 2018 - 13:08:49
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hor yimid qorshe la doonayo in sanadkan dhamaadkiisa Soomaaliya looga saaro Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ee ka howlgala gudaha Soomaaliya.
Madaxwenaha maamulka Somaliland oo magacaabay 11-xil oo cusub .
0 Monday January 29, 2018 - 12:04:24
Digreeto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa lagu magacaabay qaar badan oo kamid ah Gudoomiyaasha gobolada Somaliland iyo Afhayeenka Madaxweynaha.
Qorshihii Horumarinta Qaranka oo qarka u saaran in uu Bur buro iyo sababta ka dambeysa.
0 Monday January 29, 2018 - 11:27:05
Mudda dheer uu dalka ka shaqeeynayay barnaamijka New deal, dowladdi uu Madaxweynaha u ahaa Xassan Shiikh Maxamuud ayaa ku guuleeysatay sameynta Qorshaha Horumrunta Qaranka oo ay ugu danbeeysay 1986.
Madaxweyne Trump oo ka xumaaday in Hillary Clinton Akhriso Buuga Fire and Furry.
0 Monday January 29, 2018 - 10:21:57
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donlad Trump ayaa la sheegay in uu ka xumaaday in Hillary Clinton uu kaga guuleestay doorashadii dhacday ay akhriso buuga Fire and Furry ee isaga laga qorey .
Qaar kamid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka G/Banaadir oo xaalka ku xun yahay Olole xoogana bilaabay.
0 Monday January 29, 2018 - 10:17:43
Weerar toos ah oo saakay lagu qaaday Jaamacada Marshal Fahim .
0 Monday January 29, 2018 - 09:13:07
Dagaalyahano hubeesan ayaa saakay weerar isugu jira ismiidaamin iyo mid toos ah ku qaaday Jaamacada Gaashaandhiga Qaran ee Marshal Fahim, halkaas oo lagu tababarayay ciidamo katirsan Milatariga Afganistan.